Fiaramanidina miaramila X-Plane 11
Fampidinana: 7,072 alaina 966,889 fotoana.
Sokajy: fiaramanidina miaramila X-Plane 11
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 8
X-Plane 11 RNAF Default KC-10 1.0. Ity dia livery Air Force Royal Netherlands ho an'ny default KC10. Mbola misy roa ampiasaina any Netherlands (indray andro any dia hosoloina ny tanker A330). Unzip ary apetraho ao amin'ny fizarana aty amin'ny default KC-10. Raha tsy eo ny fampirimana liveries dia mamorona iray fotsiny. Nosoratan'i Henk de Bruin.
Noforonina Alakamisy, 04 Jolay 2019 23: 59
Anaran'ny fisie rnaf_xp11.zip
Size 33.23 MB
X-Plane 11.30+ Vickers Valiant 2.0
X-Plane 11.30+ Vickers Valiant 2.0. Ity dia famerenana mandefa ny maodely tany am-boalohany an'i Daniel Grimes, nohavaozina (nahazoana alalana) ho an'ny X-Plane 11. Ny famaritana tany am-boalohany an'i Daniel dia toy izao: The Valiant no mpamono V voalohany nanompo; ary ny voalohany tsy miasa! Natao ho elanelana fijanonana amin'ny haitao ambany io mandra-pahatonga ny Vulcan sy Victor mety hampidi-doza kokoa. Ny Valiant dia tsy nanana ny hatsaran-tarehin'ny Vulcan sy ny vady maharitra an'i Victor, ka io no V-bomber tsy dia fantatra loatra. Nesorina vetivety ihany koa izy io taorian'ny serivisy niasa 10 taona noho ny olan'ny havizanana izay nanjary niharihary rehefa nifindra avy any amin'ny avo ka hatrany amin'ny toerana ambany ny Vulcan sy i Victor) - tsy nahomby ny elatra elatra lehibe rehefa nisy Valiant amin'ny sidina, saingy niverina tany amin'ny base izy io. Ny serivisy Valiant dia nahita an'i Egypt tamin'ny 1956. Ny rakitra zip dia misy 3 Valiants: Type 660 Prototype - maotera tsy matanjaka ary somary maivana kokoa noho ny maodely famokarana - vita amin'ny vy tsy mitongilana, Type 673 Valiant B2 Pathfinder, ary farany Type 706 Valiant B1 . Ny antsipirian'ny karazan-karazany tsirairay dia hita ao amin'ireo antontan-taratasy. Misaotra an'i Daniel indray aho noho ny famelany hanavao ity maodely ity. Nosoratan'i Ray Hill.
Noforonina Alatsinainy, 15 Jolay 2019 23: 21
Anaran'ny fisie vickers_valiant.zip
X-Plane 11.30+ Valiant B1 2.0
X-Plane 11.30+ Valiant B1 2.0. Ny Valiant no mpamono baomba V voalohany nanompo, ary ny voalohany tsy nanompo! Natao ho elanelana fijanonana amin'ny haitao ambany io mandra-pahatonga ny Vulcan sy Victor mety hampidi-doza kokoa. Ny Valiant dia tsy nanana ny hatsaran-tarehin'ny Vulcan sy ny vady maharitra an'i Victor, ka io no V-bomber tsy dia fantatra loatra. Ity dia asa fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fananganana efa napetraka, iray volana lasa izay: VICKERS_VALIANT.ZIP. Navoaka ho toy ny fiaramanidina vaovao izy satria manana fiasa fanampiny manan-danja. Ny mari-pankasitrahana lehibe dia an'i Daniel Grimes noho ny rafitra niandohany, ary koa tamin'i DomHenry mandritra ny ora maro amin'ny asa an-tsary amin'ny antsipiriany sy ny fampifangaroana zavatra manaraka (indrindra amin'ny faritra fidirana sarotra). Fanatsarana ny fiarandalamby, ny frezy, ny haitao ary ny fanamafisana ny baomba baomba no anjara birikiko manokana. Azafady mba jereo ny antontan-taratasy voarohirohy raha mila fanazavana fanampiny momba ity maodely ity. Nosoratan'i Ray Hill.
Noforonina Talata, 16 Jolay 2019 00: 09
Anaran'ny fisie vickers_valiant_b_1.zip
Size 111.57 MB
X-Plane 11.30+ BAC TSR-2 2.1
X-Plane 11.30+ BAC TSR-2 2.1. Ny British Aircraft Corporation TSR2 dia fikomiana tamin'ny Ady mangatsiaka sy fiaramanidina fiarovan-tena novokarin'ny British Aircraft Corporation ho an'ny Royal Air Force tamin'ny faramparan'ny taona 1950 sy ny fiandohan'ny taona 1960. Ity dia fampifanarahana ny asa nataon'i Daniel Grimes teo aloha (nahazoana alalana), ary ohatra tsara amin'ny zavatra azony. Ny fiaramanidina dia manomboka amin'ny vatan-tsambo 3D tsy vita, noho izany azafady ampiasao ny kinova 2D (Alt + W). Antontan-taratasy tafiditra ao anaty fonosana. Version 2.1: Maro ireo mpampidina download no nahita fa sarotra be ny nanidina. Nisy olana lehibe teo amin'ny horonan-taratasy. Nasiako tweets ny ascenseur izay avo ankehitriny ary manamboatra an'io olana io. Nosoratan'i Ray Hill.
Noforonina Alarobia, 31 Jolay 2019 02: 15
Anaran'ny fisie bac_tsr2.zip
X-Plane 11.30+ AVRO 707 1.0.1
X-Plane 11.30+ AVRO 707 1.0.1. Avro dia nanangana prototypes efatra hanandramana toetra mampiavaka ny endrika elatra amin'ny baomba Vulcan. Ity dia famerenana fotsiny ny sangan'asa voalohany nataon'i Daniel Grimes izay hatrany amin'ny V11 (tsy tokony havela hihasimba). Ny fiaramanidina tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy (ny roa voalohany dia ratsy toetra). Azafady manidina avy amin'ny fijerena ivelany (shift 4) satria mila manao fanaovan-tsoa indray ny vatan'ny cockpit (tsy hoe hisy zavatra manaitaitra loatra amin'izany). Mahaliana ny mahita ny fahasamihafana hita amin'ny alàlan'ny kinova ary ampitahao ny layout miaraka amin'ny MK1 Vulcan (indrindra ny C). Ny fitobiana amin'ny delta dia misy fanamby mitaky ny fanatonan'ny orona avo izay manome vokany ambony amin'ny solaitrabe, noho izany ny fiaramanidina matetika dia mitsingevana eny amin'ny làlambe raha toa ka avo loatra ny hafainganam-pandeha. Taty aoriana, ny Fairey Delta 2 dia nampiasaina tamin'ny fomba mitovy amin'ny fanombanana ny Wing for Concorde. Azafady mba jereo ny antontan-taratasy voarohirohy raha mila fanazavana fanampiny momba ity maodely ity. Nosoratan'i Ray Hill.
Noforonina Zoma, 09 Aogositra 2019 00: 43
Anaran'ny fisie avro_707.zip
X-Plane 11.30+ Ilyushin Il-28 Beagle 1.0.1
X-Plane 11.30+ Ilyushin Il-28 Beagle 1.0.1. Ilyushin Il-28 dia mpandefa baomba tamin'ny vanim-potoana taorian'ny ady izay novokarina ho an'ny tafika an'habakabaka Sovietika. Io no fiaramanidina voalohany an'ny Sovietika niditra tamin'ny famokarana lehibe. Izy io koa dia naorina tany Sina ho Harbin H-5. Ny famokarana tanteraka tao amin'ny orinasa telo dia nanomboka tamin'ny volana septambra 1949, niaraka tamin'ny fandefasana serivisy nanomboka ny fiandohan'ny taona 1950, namela ny 25 Il-28 hiseho amin'ny diaben'ny Fetin'ny Mey May 1950 (araka ny baikon'i Joseph Stalin rehefa nasaina hamokatra izy tamin'ny 1949). Ny Il-28 dia naondrana betsaka, nanompo tamin'ny tafika an'habakabaka 20 miampy firenena, nanomboka tamin'ny Pact Warsaw ka hatrany amin'ny tafika an'habakabaka afovoany atsinanana sy afrikanina. Ny roa dia fiaramanidina aseho eto; ny iray ampiasain'ny Tafika an'habakabaka faha-57 miorina ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Lviv (UKLL), ary ny iray hafa dia ny AB faha-51 an'ny tafika ejipsiana (Repoblika Arabo Mitambatra) monina ao amin'ny seranam-piaramanidina Azmara (HEAZ). Ny trosa dia mankany amin'i Beber amin'ny fampiasany ny mpanamory fiaramanidina. Nosoratan'i Philippe Gastebois.
Noforonina Zoma, 30 Aogositra 2019 00: 54
Anaran'ny fisie ilyuchin_il-28_v1_0_1.zip
X-Plane 11.30+ Vickers Varsity 1.2.0
X-Plane 11.30+ Vickers Varsity 1.2.0. The Vickers Varsity dia mpanazatra ekipazy vita kambana anglisy izay tantanan'ny Royal Air Force nandritra ny 25 taona hatramin'ny 1951. Ny Varsity dia natolotra hisolo ny mpanazatra Wellington T10. Ny fiaramanidina famokarana voalohany dia natolotra hampiasaina tamin'ny 1951 hatramin'ny No. 201 Advanced Flying School ao amin'ny RAF Swinderby, izay nampiofanina hampiofana mpanamory fiaramanidina manana fiaramanidina marobe. Izy io koa dia nanolotra Sekolin'ny Air Navigator roa tamin'ny 1952, ary ny sekoly Bomber Command Bombing, miaraka amina ekipa mpampiofana ho an'ny ekipa mpamono V-bomber an'ny RAF Bomber-Command. Ny ohatra manidina farany (Serial WL679) dia nataon'ny Royal Aircraft Establishment; efa nisotro ronono izy io ary notehirizina tao amin'ny RAF Museum (Cosford) tamin'ny taona 1992. Azafady mba jereo ny antontan-taratasy voarohirohy raha mila fanazavana fanampiny momba ity modely ity. Nosoratan'i Ray Hill.
Noforonina Alakamisy, 12 Septambra 2019 00: 13
Anaran'ny fisie vickers_varsity.zip
X-Plane 11.30+ pejy Handley Victor B Mk2 V2
X-Plane 11.30+ pejy Handley Victor B Mk2 V2. Ny Handley Page Victor dia mpandrafitra baomba maty paika anglisy, novolavolain'ny orinasa Handley Page Aircraft Company, izay niasa nandritra ny Ady mangatsiaka. Izy io no mpandefa baomba V fahatelo sy farany nampiasain'ny Royal Air Force, ny roa kosa Avro Vulcan ary Vickers Valiant. Azafady mba vakio ireo rakitra fanamoriana. Nosoratan'i Ray Hill sy Dom Henry.
Noforonina Alarobia, 02 Oktobra 2019 22: 13
Anaran'ny fisie handley_page_victor_b_mk2.zip
Size 117.76 MB
X-Plane 11.30+ Northrop YB-49 1.0. Fitsapana aero mahaliana fotsiny ity. Northrop dia azo antoka fa tamina zavatra tamin'ity iray ity (voamarina eto amin'ny alàlan'ny tionelin'ny rivotra mihetsika Laminar). Ka tsy misy zavatra manokana eto; lalitra, horonan-taratasy, tadivavarana tsara dia tsara, olana amin'ny fiainganana manandrana mitazona azy mahitsy eny amin'ny làlambe ary tsy mila flap amin'ny fiaingana. Speedbrakes sy flaps mety amin'ny fipetrahana, mampiasa fomba lava toy ny fiaramanidina. Vao avy nihady ny fototra ho an'ity aho. Raha misy te haka tahaka an'io ary hampandroso azy dia vonjeo aho. Ity maodely ity no kinova jet manaraka. Nosoratan'i Ray Hill.
Noforonina Zoma, 18 Oktobra 2019 22: 03
Anaran'ny fisie northrop_yb-49.zip
X-Plane 11.35+ Fairchild Packet C-119 Flying Boxcar 0.97
X-Plane 11.35+ Fairchild Packet C-119 Flying Boxcar 0.97. Ity no C-119 voalohany manidina ho an'ny Air Force Belgian. Ny raiko dia nanidina izany tamin'ny volana oktobra 1952 avy tao ONBR, izay toby miaramila an'ny elatra faha-15 ao Melsbroek, ivelan'i Bruxelles. Ny kinovan'ny fiaramanidina voalohany nataoko tamin'ny taona 1999 ho an'ny X-Plane 5.5 ary nomena an'i Austin Meyer izay nampiditra azy io tamin'ny fisintomana. Avy eo dia nanomboka nanidina fiaramanidina tena izy aho hatramin'ny vao haingana, rehefa nanosotra ilay C-119 taloha avy tamin'ny raiko aho. Nandeha ny fiaramanidina tany amin'ny toerana maro tany Eropa izy ary koa tany Kongo Belzika, nankany amin'ny tobin'ny tafika Kamina. Nanidina nanerana an'i Afrika izy ireo, tamin'ny alina, nampiasa sextant bubble hahitana ny toerana misy azy ireo amin'ny kintana telo. Avy eo dia nampiasaina koa ny driftmeter hahitana ny singa rivotra amin'ny lalan'izy ireo. Ity maodely X-Plane 11 ity dia namboarina avy amin'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa C-119 izay ananako, araka ny nojeren'ny tranombakoka an-habakabaka Brussels an'ny Le Cinquantenaire. Ny ankamaroan'ny zavamaneno dia tena kopia fa, amin'ny toerana sasany, tsy maintsy nampifanarahiko tamin'ny simulator maoderina izy io. Ny switch start-up dia eo amin'ny tontonana ambony. Mariho fa ny fiaramanidina dia afaka mamadika ny haavon'ny propeller. Izy io dia voamarika ho faritra mena amin'ny throttles. Amin'ny tena fiainana dia mila atsangano ny tahony hitodika ary hampidina azy ireo. Ao amin'ny simulator, miaraka amin'ny valopy famenonanao dia afaka mandeha tsy miasa fotsiny ianao - tsy misy pitch. Raha hiverenana dia mila esorinao ny totozy amin'ny totozy, eo amin'ny efijery. Azonao atao ny misintona tantanana iray amin'ny fotoana, na izy roa raha toa ny antsasaky ny totozy eo anelanelany. Fanamarihana: noho ny fetran'ny fitaovana, dia toy izao ny fantson'ny throttle: manomboka amin'ny joystick anao, manomboka amin'ny idle ka hatramin'ny 99 isan-jaton'ny herinao lehibe indrindra. Mba hanahafana ny tsindrona rano dia atodiho ary ho lasa 100 isan-jato ny tahony. Ampianaro aho hanatsara ny fiaramanidina. Ny hevitra rehetra dia raisina an-tanan-droa (tafiditra ao anatiny ny antsipirian'ny fifandraisana) PS: ny renim-pianakaviana eo amin'ny solaitrabe. Ny raiko dia nanana ny sariny foana tamin'ny sidina lavitra nataony. Nosoratan'i Michel Verheughe.
Noforonina Alahady 17 Novambra 2019 20: 52
Anaran'ny fisie c-119_boxcar.zip